April 2016 – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda waxbarashada Puntland iyo hay’adda WFP oo maanta furay mashruuca quudinta ardayda dugsiyada hoose/dhexe
30/April/2016- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland iyo Hay’adda cuntada aduunka ee WFP ayaa maanta si wadajir ah ufuray mashruuca quudinta ardayda dugsiyada hoose/dhexe ee Puntland, iyadoo WFP […]
Wasaarada Waxbarashadda dowladda Puntand oo soo saartay xeerkii tacliinta sare ee Puntland.
26/April/2016- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa markii ugu horeysay sameysay xeer lagu maamulidoona jtaaamacaddaha kuyaala Puntland, si loo ilaaliyo tayada tacliinta sare ee Puntland. Xeerarkaa ayaa […]
Booqasho khibrad wadaag Waxbarasho oo dhexmaray Wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo Jubaland.
13/April-2016- Waxaa maalmahanba booqasho ku joogay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ,wafti ka socda wasaaradda waxbarashada dowlada soomaliya iyo wasaaaradda waxbarasahada dowlad goboleedka jubaland. Mas’uuliyiin ka socday waxbarashada jabaland oo […]
11/April/2016- Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda Puntlan Maxamed Cabdiqaadir ayaa maanta si rasmi xilkiisi ugala wareegay agaasimihi hore ee wasaaradda waxbarashada Axmed Cali Shirre. halka isagana uu ku wareejiyay […]